Barcelona Oo Cashar U Dhigtay PSG, Una Gudubtay Semi-finalka Champions League
HomeChampions LeagueBarcelona Oo Cashar U Dhigtay PSG, Una Gudubtay Semi-finalka Champions League
Laba gool oo uu qaybtii hore ee ciyaarta shabaqa ku shubay xidiga Neymar ayaa u horseeday Barcelona guul ay u qalantay inay kaga dul boodo Paris St-Germain isla markaana iska xaadiriso Semi Finalkii saddexaad ee Champions League oo xidhiidh ah.
PSG, oo laga doonayay inay iska dul qaado kana soo kabato natiijo 3-1 ahayd oo ay gosha sii gashatay habeenkii garoonkeeda la joogey is is araga hore, ayaa waxaa laba isleeg ka kala dhigay, niyadeediina burburiyey kubadii uu la dhex qaaday Andres Iniesta ee uu ku caawiyey Neymar isna uu shabaqa ku ruxay.
Xidiga reer Brazil ayaa kiisii labaadna raaciyey isla qaybtii hore ee ciyaarta , kaas oo samaawaadka kaga laalay rajadii PSG ee soo kabasho iyo celceliskii goolasha ee labada kooxood u dhexeeyey.
Waxaanay Barca ahayd qaybtii dambe, tu iska dheel-dheelaysa oo sugaysa uun siidhiga dhamaadka iyo inay hore ka bilowdo diyaar garowga horyaalkii u horeeyey ee Champions League ah tan iyo sanadii 2011 – kii.
Kubadii uu ka shaqeeyey iyo xarfadii uu ku dhex qaaday ciyaaryahanada PSG, laacibka khadka dhexe ee Iniesta ee dhashay goolka koobaad ayaa noqon doonta mid lagu xasuusto – Mid kamid ah goolashii ugu quruxda badnaa ee ka dhasha horyaalka Champions League, iyo kii sababay ama aabaha u ahaa guusha Barca ee labadii kulanba.
Xidiga xulka qarankiisa kula guuleystay koob aduunka, ayaa kubada ka soo qaatay badhtamaha garoonka, si aad u qurux badana ula dhaafay oo u tiriyey saddex kamid ah xidigaha PSG, intii aanu u taraarixin Neymar oo isna masaxay David Luiz iyo goolwade Salvatore Sirigu.
PSG ayaa rajaynaysay in soo noqoshada Zlatan Ibrahimovic – maaha kaliya xulka koobaad ee uu ku soo noqday kadib ganaaxii, laakiin aqoonta uu u leeyahay kooxdiisii hore – ayaa ku soo af-goyday waxba kama jiraan iyo hal bacaad lagu lisay.
Laakiin waxaa la odhan karaa , xidiga reer Sweden wuxuu go’doon ku ahaa cid caawisana uu ku waayay – afka hore ee kooxda habeenkan.
Laba kubadood oo mid Off-side noqotay , tan kalena uu faraha ku jaray goolwadaha Barcelona , Marc-Andre ter Stegen marka laga reebo, Ibra ma ahayn mid u muuqda sidii la saadaalinayay.
Edinson Cavani, oo 80 kii daqiiqo ee uu ciyaarta ku jiray, taabtay tiro kubado ah oo ka yar xataa ciyaaryahanka Barca bedelka ugu soo gallay qaybtii dambe ee Xavi, ayaa PSG u abuuray fursad dhamaadkii ciyaarta gool loo fishay laakiin noqon weyday.
Isku soo wada duubo, kooxda tababare Luis Enrique waxay muujisay dedaal ay qaybtii hore ee ciyaarta kaga midho dhalisay , waxaanay heegan u gellaysaa hadda wixii ka dambeeya , u diyaargarowga sii xoojinta Hogaanka Horyaalka maadaama ay Yurub afarta u dambeeya sii suge ka tahay.
Everton Oo Shaacisay Dhamaystirka Saxeexa Yannick Bolasie
Tababare Louis Van Gaal Oo Cadeeyey Inuu Ka Tagayo Kooxda Manchester United Xagaaga Danbe
Video: Munir, Messi & Iniesta Oo Ka Riwaayadsaday Pedro